Raysal wasaaraha oo ku fashilmay in uu akhlabiyad helo | Somaliska
Ka dib natiijadii doorashadii ee soo baxday maqribnimadii axada ayay xulufada Raysal wasaare Reinfeldt heleen 172 kursi oo baarlamaanka ah ayagoo u baahnaa 3 kursi oo keliya si ay u sameystaan dowlad akhlabiyad ah oo ay ku maamuli karaan wadanka ayagoon xisbiyada kale ka raadsan taageero. Hadaba rajada raysal wasaaraha ayaa shalay kor u kacday ka dib markii la saadaaliyay in uu heli karo 3da kursi ee uu baahanyahay maadaama aan xiligaas la tirin cododkii laga soo diray wadanka dibadiisa. Nasiib daro xulufada raysal wasaaraha ayaa helay 1 kursi oo dheeri ah ayagoo ka helay gobolka Dalarna, arintaas ayaa soo afjareysa tirintii cododka ayadoo hada uu raysal wasaaruhu ku qasbanyahay in uu taageero ka raadsado xisbiyada kale ee ka soo horjeeda asaggoo mar hore carabka ku dhuftay in uu la hadli doono xisbiga cagaaran ee xulufada la ah xisbiga Social Demokraterna sheegayna in uusan marnaba la shaqeyn doonin cunsuriyiinta SD. Si kastaba ha ahaatee, Raysal wasaare Fredrik Reinfeldt ayaa haysta ilaa 5 bisha oktoobar inuu ku soo dhiso dowlad dhamaystiran.
Raysal wasaaraha oo ku fashilmay in uu akhlabiyad helo
Ka dib natiijadii doorashadii ee soo baxday maqribnimadii axada ayay xulufada Raysal wasaare Reinfeldt heleen 172 kursi oo baarlamaanka ah ayagoo u baahnaa 3 kursi oo keliya si ay u sameystaan dowlad akhlabiyad ah oo ay ku maamuli karaan wadanka ayagoon xisbiyada kale ka raadsan taageero.
Hadaba rajada raysal wasaaraha ayaa shalay kor u kacday ka dib markii la saadaaliyay in uu heli karo 3da kursi ee uu baahanyahay maadaama aan xiligaas la tirin cododkii laga soo diray wadanka dibadiisa.
Nasiib daro xulufada raysal wasaaraha ayaa helay 1 kursi oo dheeri ah ayagoo ka helay gobolka Dalarna, arintaas ayaa soo afjareysa tirintii cododka ayadoo hada uu raysal wasaaruhu ku qasbanyahay in uu taageero ka raadsado xisbiyada kale ee ka soo horjeeda asaggoo mar hore carabka ku dhuftay in uu la hadli doono xisbiga cagaaran ee xulufada la ah xisbiga Social Demokraterna sheegayna in uusan marnaba la shaqeyn doonin cunsuriyiinta SD.
Si kastaba ha ahaatee, Raysal wasaare Fredrik Reinfeldt ayaa haysta ilaa 5 bisha oktoobar inuu ku soo dhiso dowlad dhamaystiran.
Tirada magangalyo doonka oo cirka isku shareertay iyo Soomaalida oo hoos u dhacday